Agaasimihii Madaxtooyada Jubbaland oo lagu xanibay Garoonka Aadan Cadde | KEYDMEDIA ONLINE
Agaasimihii Madaxtooyada Jubbaland oo lagu xanibay Garoonka Aadan Cadde
Agaasimaha oo ka mid ahaa wafdigii Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam 'Axmed Madoobe' ee Muqdisho u tagay shirarkii looga hadlayay arrimaha doorashada ayaana tan markaa magaalada ka bixin, isagoona howlo shaqo u joogay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Agaasimaha Madaxtooyada Jubbaland Abshir Maxamed ayaa maanta lagu xanibay garoonka diyaaraddaha Aadan Cadde ee Muqdisho, isagoo ku sii jeeday magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya.
Macaaluumaad ay heshay Keydmedia Online ayaa sheegaya in markii hore Agaasimaha lagu xanibay Baasaboorka Soomaaliga ee Diblomaasiga oo ku jiray liiska madow (Black List), kana mid ahaa mas'uuliyiinta Jubbaland ee horay Black List-ga loo geliyay baasabooradooda Diblomaasiga intii uu jiray khilaafkii DFS iyo Jubbaland.
Hase ahaatee waxaa uu markii dambe la soo baxay Baasaboor Ajnabi uu watay, inkastoo lagu wargeliyay in arrinta aysan aheyn Baasaboorka kaliya oo Nabadsugida ay heysato, waxaana is mari-waa arrintaas ka dhashay ku soo baxay wasiiro iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan dowladda.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Axmed Ciise Cawad oo Garoonka ku sugnaa iyo Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Oomaar oo arrintaas xalinteeda galay ayaa la xiriiray Mas'uuliyiinta hey'adaha dowladda, si Agaasimaha loogu ogolaado safarkiisa, iyadoona markii dambe la fasaxay xilli ay diyaaraddii ka tagtay.
Xiriirka Siyaasadeed ee Dowladda Soomaaliya iyo Maamulka Jubbaland ayaa u muuqdo mid aan weli xal laga gaarin, iyadoona Villa Soomaaliya aysan weli ka quusan daan daansiga siyaasiyiinta Jubbaland ee ka safra Garoonka Muqdisho.